फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - स्वचालित देश
स्वचालित देश विश्व विनोद
यहाँ सगरमाथा चढ््न सोध्नु पर्दैन । चढ्नु छ भने आफै स्वचालित हुनुस् । चन्दा र बन्दको लागि यौटै व्यक्ति स्वचालित भए काफी हुन्छ यहाँ । ठूला विद्युत् आयोजनाको क्षमता विस्तारमा सुटुक्क निर्णय गर्न सकिन्छ । हो यो देश अचम्मको भा’को छ, गाउँमा सडक गा’को छ, मान्छे शहर आ’का छन् । खेतमा घर फलेको छ । देश रेमिट्यान्सले सञ्चालित छ । वैदेशिक रोजगार, साँच्चै यस्तै यस्तै छ देश । त्यसैले कतिपय काम निर्देशित छन् । कतिपय काम स्वचालित छन् । वैदेशिक निर्देशिनको बोलाबाला छ यहाँ । डनको निर्देशनको चालामाला छ । यहाँको अर्थतन्त्र निर्देशित छ, पर निर्भर छ, नीति निर्देशित छ, रीति निर्देशति छ । के तपाईलाई लाग्दैन तपाई कस्तो हुनुहुन्छ ! स्वचालित या निर्देशित ? तपाई पक्कै पनि कुनै पार्टीको इशारामा चल्ने निर्र्देशित मेशिन त हैन ? तपाईको चिन्तनले स्वभाविक रूपमा, स्वचालित रूपमा विवेकको काम भा’को भए के यो देश उदेक लाग्दो हुन्थ्यो होला र ? फेरि एक पल्ट सोधेँ– ‘तपाई स्वचालित कि निर्देशित ?
बेशीसहर नगरपालिका ३, लमजुङ